Cuntada Cuntada ee Cunnada leh kareemka la kariyey iyo Strawberries - Sugar Geek Show - Keega
Cuntada Cuntada ee 'Angel Food Cake' oo leh Strawberries iyo kareem la kariyay
Keegga cuntada ee malaa'igtu waa keegga ugu fudud, ugufiican, iyo daruur u eg waligaa aad dhadhamin doonto. Keegga cuntada ee malaggu waa mid aan dufan lahayn oo leh bur aad u yar sidaa darteed sidoo kale waa mid ka mid ah xulashooyinka keega ee ugu caafimaadka badan. Waxaan jecelahay inaan keeggan helo xagaaga oo aan ku dul shubo miro doogga cusub iyo kareemka la dubay ee guriga lagu sameeyo, tani waa hubaal inay noqon doonto qaab cusub oo la jecel yahay.
Ma ogtahay sida ugu badan keega cuntada ee malaa'igtu aad uga iibsato dukaanka dhadhamin nooca roobaadka? Tani maahan keeggaas. Waa waali jilicsan, jilicsan, oo dhalaalaya afkaaga. Waxay ka duwan tahay wax aan waligey hore u dhadhamiyey.
Keegga cuntada ee malaggu wuxuu helayaa iftiinkiisa iyo cufnaantiisa jilicsan mahadsanid ukun cad oo la karbaashay oo si tartiib ah ugu laalaada burka. Asalka Cunto kariska malak cunnada asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka oo markii ugu horeysay caan noqday dabayaaqadii qarnigii 19aad. Waxay ku kasbatay sumcaddeeda gaarka ah iyada oo ay weheliso magaceeda sababtoo ah iftiinka iyo qaab-dhismeedka qalafsan.
DAMBIGA CUNTADA MAGAALADA INGREDIENTS
Cunto kariskaan malaa'igta ah ayaa kaliya qaadaneysa 6 maado. Saliidan ama dufanka kuma jiraan cuntadan, sidaas darteed waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah keega 'caafimaadka ugu fiican' ee aad cuni karto!
Waxaad ogaan kartaa inaysan jirin budada dubista ama wakiilada soo kacaya cuntadan. Waxa kaliya ee ku abuuraya wiishka keega cuntada malaggu waa ukunta cad, markaa hubi inaad karbaashid si ay u noqdaan iftiin saafi ah oo qalafsan. Hawada oo dhami waxay siin doontaa keegga iftiinkiisa iyo qaabkiisa jilicsan.
Sidoo kale saliidan, subagga ama dufanka kuma jiro cuntadan, taas oo ka dhigaysa xoogaa qalalan oo jilicsan. Marka ha nixin markaad keeggan kaligaa dhadhamiso oo waxay u dhadhamaysaa hawo lol. Asal ahaan waa weel loogu talagalay dusha sare ee strawberry, ganache shukulaatada, ama qaado badan oo jalaato ah iyo berry cusub.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka kooban cuntadan malaa'igta ah ayaa ah ukun cad oo lagu kariyay xoogaa sonkor ah si ay u sameyso meeris jilicsan. Qaddar yar oo bur ah ka dib ayaa lagu laalaabayaa ukunta cad si keegga loo sameeyo. Waxaad isticmaali kartaa ukunta cusub oo si taxaddar leh looga soocay ukunta ukunta ama waxaad u isticmaali kartaa ukunta cad ee la kariyey sanduuqa.
Haddii aad isticmaaleyso ukumo cusub, xusuusnow inaadan u oggolaan adhibicukunta ukunta ukuntaada cad. Jaallo kasta oo raagtaa waxay ka joojin kartaa mingiskaaga karbaashida.
Sida loo kala saaro ukunta:
sida ganache loogu shubo keeg
U diyaarso 3 fijaanno-1 jaallo ah, 2 si aad ugu dillaacdo kuwa cad, iyo 3 ukunta oo dhan. Sababta aan u haysanno labada fijaan ee 2aad iyo 3aad ayaa ah haddii aad isku dhexgashid oo aad si shil ah u hesho jaale yar oo ku yaal weelka 2aad, ma burburin doono dhammaan ukumihii aad horey u kala go'day
Ukun dillaac dusha sare oo si tartiib ah u kala jajab laba gacmood, ku dheji weelka 2aad oo si tartiib tartiib ah dib ugula noqo yok inta udhaxeysa labada ukun. Ka taxaddar inaadan jajabin. Mar alla markii caddaanka oo dhan ku jiro weelka 2aad, ku dar jaalladda weelka 1aad oo ku shub caddaanka weelka 3aad. Ku celi ilaa ukuntaada oo dhami ay kala go'do.
Waad badbaadin kartaa jaallahaaga hadhay si aad u sameysid liin dhanaan ama kareemka cajiin ama French buttercream . Ukunta ukunta waxaa lagu keydin karaa qaboojiyaha ilaa seddex maalmood.
DAMEERKA CUNKA MAGAALADA TALLAABO-TALLAABO
INTA AADAN BILAABAN - Natiijooyinka ugu fiican, isticmaal miisaanka cuntada si loo miisaamo maaddooyinkaaga. Ku beddelidda qoddobkan koobabka waxay u horseedi kartaa isku-darka cuntada iyo walxaha lumay. Akhriso qoraalkayga sida loo isticmaalo miisaanka wixii macluumaad dheeraad ah.
Tallaabada 1 - Kuleyli foornadaada ilaa 375º F / 190º C ka dibna u wareeji raashinka foornada dhererka labaad ee ugu hooseeya. Hubso inaad haysato malag digsiga keega cuntada (tuubbada tubbada) nadiif ah oo diyaar u ah inay socoto. HA DUULIN! Waxaan ku celinayaa, HA DUFIN malagaga digsiga keega cuntada. Waxaan runtii dooneynaa keegga inuu ku dhejiyo dhinacyada.
Tallaabada 2 - Si wadajir ah uga wada diga bur, sonkor, iyo galley. Iska tuur buruq kasta oo adag oo haraaga ah. Kala qaad isku darka burka a labaad waqtiga. Waxaad rabtaa inaad kala sifeyso tan laba jeer maxaa yeelay waxaan rabnaa isku dar burka inuu noqdo mid fudud oo hawo leh intii macquul ah.
Dareenka galleyda ee ku jira cuntadan waxay ka caawineysaa in keega uu noqdo mid aad u fudud oo qalafsan oo aan ahayn mid aad u cufan ama 'eggy'.
Tallaabada 3 - (Hubso inaad u isticmaashay baaquli bir ah talaabadan, iyo in weelka uu yahay mid nadiif ah. Dufan kasta wuxuu ka hortagayaa ukuntaada cad inuu karbaasho. Xitaa waad ku tirtiri kartaa xoogaa khal khal ah si aad taxaddar dheeraad ah u yeelatid. )
Ku dar ukunta cadaan (kor ka eeg sida loo kala baxo), vanilj, cusbo, iyo kareemka dhalada ah baaquli isku qas biraha oo ku lifaaqan lifaaqa. Isku qas dhexdhexaad ilaa ukuntaadu caddaan inay bilaabaan inay muuqdaan xumbo.
Talo-bixin - Waxaan door bidaa in aan u isticmaalo ukunta cusub ee meringue, laakiin sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa ukunta cad. Hadaad isticmaasho la kariyey , WAA INAAD sidoo kale u isticmaasho kareemka dhalada si aad u xasiliso.
Tallaabada 4 - Marka ukuntaada cad ay u egyihiin cadaan iyo xumbo, ku saydhaa sonkorta adoo isku qasaya xawaaraha dhexdhexaadka ah. Isku qas dhexdhexaad-sare ilaa jilicsan, taag adag.
Waxaan isticmaalayaa tayda Bosch Universal Plus qas a for this recipe, waxaad u isticmaali kartaa fiicni KitchenAid la baaquli bir ama a Mashiinka gacmeed.
Tallaabada 5 - Marka ukuntaada cad ay joogto meelaha ugu jilicsan, waxaad arki doontaa khadad qaarkood oo ka soo baxaya dusha sare ee isku darka. Meringue waa inuu ahaadaa mid jilicsan oo jilicsan isla markaana ku hayaa qaabkooda baaquli. Haddii aad isticmaaleyso baaquli isku dhafan oo 'Bosch' ah, ku wareeji meringue baaquli weyn oo galaas ah si laabku u fududaado.
Tallaabada 6 - Adoo isticmaalaya wax yar oo colander ah, ku sifee qiyaastii 1/3 koob oo bur ah isku darka dusha meeriska dushiisa. Si taxaddar leh isugu laab adigoo isticmaalaya spatula. Marka burka inta badan la laalaabo, kala shaandhay 1/3 koob oo bur ah dusha sare. Si siman ugu dul fuul dusha sare ee meringue, iskuday inaad ka fogaato sameynta bur aad u weyn oo dhexda ku jira. Ku celi illaa inta ay burku isku wada duuban yihiin.
Si aad u xoqdo - xoqdo spatula ka hooseysa meeriska oo si tartiib ah u soo jiid bartamaha si aad ugu laab laabato. Ka taxaddar inaadan waligaa burburin isku dar ah ama aad si xoog leh isugu qasin, samir yeelo ! Fiiri fiidiyowga hoose ee kaarka cuntada sida muuqaal ah.
Tallaabada 6 - Kalabadh baydh ku shub an malag digsiga keega cuntada. Si siman ugu faafi digsiga tuubada. Ku dar inta hartay inta ka hartay oo sifiican u simo si ay u noqoto mid siman. Isku day inaadan ku dhicin wax aad u badan tuubada ama dhinacyada. Tani way gubi doontaa oo ma noqon doonto mid macaan.
Xusuusnow HA DARIN digsigaaga ! Waxaad dooneysaa in garaacista ay ku dhegto cidhifyada digsiga, tani waa waxa ka celinaya keega cunnada malaggu inuu ku soo dhaco laftiisa.
Tallaabada 7 - Toorey ku dhex mar budadaada wareega si aad uga saarto goobooyin hawo ah oo aad u simi kartid baytariga.
Tallaabada 8 - Waxaad ku karisaa 375º F / 190º C illaa 35-40 daqiiqo ama illaa inta dusha sare ka noqonayso bunni dahab ah oo ay ka soo baxayaan markaad taabatid. Ka fogow furitaanka foornada ugu yaraan 35 daqiiqo si looga hortago in keeggu u soo dhaco.
Tallaabada 9 - Isla markiiba digsiga hoos ugu rog santuuqa qaboojiyaha. Keega ha ku qaboojiyo gebi ahaanba foorarsiga (illaa 2 saacadood), ama ilaa digsiga uu 100% qabow yahay taabashada. Waa muhiim in loo daayo keegga cuntada ee malaa'igta inuu iskiis u qaboojiyo si keeggu uusan kaligiis ugu burburin. Xaqiiqdii waxaan u ogolaaday keeggayga inuu qaboojiyo sagxad habeenki heerkulka qolka waana fiicnaa!
tallaabooyinka ku saabsan sida loo dubo keega
Tallaabada 10 - Markii aad qaboojiso, ku orod mindi dhuuban oo af leh hareeraha keega iyo tuubbada gudaha si aad uga sii deyso digsiga.
Tallaabada 11 - Dhig saxan wax lagu adeegto oo wax walba hoos u rog. Keegga waa inuu soo daayaa oo ku daadiyaa saxanka. Haddii digsigaagu leeyahay sagxad laga saari karo, mindi ku wareeji dusha sare ee keega si aad ugala soocdo keegga digsiga.
Tallaabada 12 - Ku saydh dhawr qaado oo sonkor ah budada si ay keega u ahaato mid wanaagsan oo qoyan.
Tallaabada 13 - Ku dar dushaaga keega cuntada leh kareemka cusub ee la kariyey iyo miraha loo yaqaan 'strawberry' (qashinka hoose). Waxaan jecelahay in aan sugo in lagu daro miisaanka miraha loo yaqaan 'strawberry top' ilaa keegga laga keenayo si sharoobada uusan uga dhigin keegga qasan eegga
Dhirta miraha loo yaqaan 'strawberry' waa uun strawberries cusub, sonkor, iyo xoogaa liin ah. Uma baahna wax cunto karin ah waana sahlan tahay in la sameeyo. Dhadhamiya cajaa'ib leh kareemka la kariyey ee guriga lagu sameeyo!
Cuntadani malak cunto karinta waxay socon doontaa dhowr maalmood heerkulka qolka, ama qaboojiyaha toddobaad. (Hubso inaad ku daboosho baakad caag ah ama ku hayso weel keeg ah si uusan u engegin.)
Nooca Pro - U adeegso mindi shiidan markii aad u jarjarayso keegga xitaa jajabyada.
WAA MAXAY MAGAALADA CUNTO DAMEERKA MAGAALADA?
An malag digsiga keega cuntada (aka a tube pan) waxaa si gaar ah loogu sameeyay keeggan. Tuubbada weyn ee ku taal bartamaha waxay ka caawisaa inay keenaan xoogaa kuleylka ah bartanka keega, iyaga oo si dhakhso leh oo siman u dubaysa.
Digsigeygu wuxuu leeyahay tuubbo ka dheereeya dhinacyada weelka, marka markaan rogrogo hoos ayaan u qaboojiyaa, waxay ku tiirsan tahay tuubbada oo ma ahan keeggeyga.
Haddii aad heli karto digsi leh “cagaha” dhinacyada, taasi way ka sii fiicnaan lahayd.
MA ISTICMAali KARAA NOOC KALE OO DHEER AH?
Weelasha Cake Bushqad - Kuwani uma shaqeyn doonaan keegga cuntada ee malaa'igta maxaa yeelay naqshadda isku dhafan uma oggolaan doonto keegga in la sii daayo. Tan iyo markii aynaan adeegsan wax sii deyn ah, waa inaan keega ka goynaa dhinacyada taasna macquul maahan digsi keeg bundt.
Digsiyada Loaf - Digsi 9 ″ x 5 ″ ah ayaa shaqeyn karta, iska hubi inaadan sidoo kale dufan. Markay ka soo baxdo foornada, digsiga hoos u jeedi oo ku xir nacasyada dhalooyinka, qasacadaha ama koobabka dusha sare ee qaboojiyaha. U daa qaboojiyaha ilaa digsiga gebi ahaanba qabow yahay (ilaa 2 saacadood).
Digsiyada Cake - Waxaad ku dubi kartaa karinta keegga cuntada ee malaa'igta ah digsiga caadiga ah ee keega. Kaliya xusuusnow ha dufan digsiga. Waxaad ku ridi kartaa goob wareeg ah warqad xardhan salka hoose ee weelka si aad uga caawiso sii deynta laakiin ha dhigin wax dhinac ah. Kaliya buuxi weelasha si aad ugu ogolaato kor u kaca.
MAXAY SAMEEYD DAMEERKEYgu?
Ka dib marka keegaaga cuntada ee malaa'igtu ay dubto, waxay u baahan tahay inay si buuxda u qaboojiso si ay u dejiso qaabka keegga. Hadaad rogto markaa keeggu wuu isku burburayaa markuu qaboobayo.
Sidoo kale, hubi inaadan si xad dhaaf ah u karbaashin ukuntaada cad. Waa inay ahaadaan kuwa ugu fiican jilicsan. Kibis badan ukuntaadu waxay sababi kartaa keegaaga inuu yaraado.
MA U BAAHANAHAY INAAN KU DARO CREAMKA TARTAR?
Haddii aad isticmaaleyso ukun cad oo la kariyey, haa. Haddii aad isticmaaleyso ukumo cusub fresh malaha. Kareemka loo yaqaan 'tartar' ayaa asal ahaan ah liin dhaf ah oo ku daraya xasilloonida ukunta cad waxayna ka caawineysaa ka hortagga meeriskaaga inuu burburo Sidaa darteed haddii aad isticmaaleyso ukumo cusub oo runti aadan rabin inaad isticmaasho, waad ka tagi kartaa. Laakiin waxay kaa caawin doontaa meringue-kaaga inuu ahaado mid xoog badan, sidaa darteed waxaan jeclahay inaan isticmaalo.
Marabtaa cunnooyin badan? Fiiri kuwan!
Keeg aan lahayn Gluten oo leh subag subag 'strawberry' ah
Gawaarida Gawaarida 'Strawberry Shortcake'
Maydha Strawberry si ay berry uga sii dheereyso
Keegga duudduuban ee Vanilla leh buttercream strawberry
Keegga cuntada iyo malaa'igta fudud ee hawada leh ma aha oo kaliya macaan laakiin waa dufan la'aan! Keeggan xagaaga caadiga ah wuxuu dhadhamiyaa waxyaabo la yaab leh oo dhan kaligiis ama waxaa loogu adeegaa miraha strawberries cusub iyo kareemka la kariyay! Waqtiga Diyaarinta:shan iyo toban daqiiqado Waqtiga karinta:Afar. Shan daqiiqado qaboojinta:laba saacado Wadarta Waqtiga:3 saacado Kalori:314kcal
Cuntada Cake Angel Cake
▢12 ounces ukun cad (cusub ama la kariyay)
▢1 qaaddo shaaha kareem ah dhalada
▢1/4 caleenta shaaha cusbo
▢6 ounces sonkorta tirada ugu horeysa
▢6 ounces sonkorta tirada labaad
▢4 ounces bur keeg
▢1 ounce galleyda
▢laba koobabka strawberries cusub googo'ay oo afar geesle ah
▢laba ounces sonkorta
▢1/2 qaaddo shaaha liin dhanaan
▢8 ounces kareemka culus ee karbaashka
▢1 ounce sonkorta budada ah
▢1/2 tsp gelatin budo ah Waxaan isticmaalaa sumadda KNOX
▢1/2 tsp kareemka culus ee karbaashka
▢1 Miisaska cuntada biyo qabow
▢Istaag mashiinka ama mashiinka gacanta
MUHIIM: Hubi in ay jiraan eber raad ukunta ukunta ukunta cad oo hubi in weelkaaga, wiishka iyo dhamaan aaladaha ay yihiin kuwo gabi ahaanba dufan lahayn oo nadiif ah ama ukunta cadaanku aysan si fiican u karbaashi karin.
Kuleyli foornadaada ilaa 375ºF. Muhiim ayey u tahay in foornada si buuxda loo sii kululeeyo ka hor intaadan keega gelin foornada oo qaadan karta 30 daqiiqo.
Isku diyaari tirada ugu horeysa ee sonkorta, bur, iyo galleyda oo dhinac iska dhig
Ukuntaada cad ku rid baaqulika mashiinkaaga istaaga oo ku lifaaqan lifaaqa ku xiran. Ku karbaasho dhexdhexaad illaa 30 ilbidhiqsi illaa ay ka bilaabaan inay xumbo yeeshaan.
Hoos u dhig xawaaraha oo ku dar kareemkaaga dhalada, cusbada iyo vaniljiga
Sii wad isku darka hoose kuna bilow rushaynta tirada labaad ee sonkorta. Kordhi xawaaraha dhexdhexaad-sare oo karbaash isku dar ah jilicsan laakiin adag. Waa inay u muuqdaan kuwo dhalaalaya oo qoyan oo dushooda waa inay si tartiib ah isugu laabtaan markaad qaadatid.
Bilaw inaad ku kala shaandhayso burka isku darka ukunta qiyaastii 1/3 koob markiiba. Si tartiib ah ugu laabo burka ukunta isku darka cad leh spatula. Tixraac fiidiyowga si aad u aragto sida habboon ee isku laab laaban. Fikradda ayaa ah in laga fogaado in hawo kasta laga tuuro meringue inta laalaabayo in baytadu aad u qalafsanaato.
Ku soo celi habsocodkan isku laaban ilaa inta isku darka daqiiqda ah lagu laalaabayo ukunta isku dar ah.
Ku shub nus malqacdaada keega cuntada ku jirta digsi tuubbo ah oo aan cusbooneysiin (malak cunnada keega cunada). Saanqa sare dusha qaaddo si baytarku u siman yahay. Ku dar inta ka hartay baytarka oo aad ku siman qaaddo. Ku darida baytiyada laba qaybood waxay ka fogaanaysaa helitaanka jeebabka hawada.
Waxaad ku karisaa keegaaga cuntada ee malaa'igta foornada oo ku taal rakibaadda xarunta illaa 40-45 daqiiqo ama illaa inta dusha sare kareyso bunni dahab khafiif ah oo keeggu dib uga soo baxayo markaad taabato
Keegga ka qaad foornada oo rog. Qaar ka mid ah digsiyada tuubada waxay leeyihiin cago yar oo saxanka ku haya foorari ama tuubada dhexda ayaa laga yaabaa inay waxyar ka yartahay dhinacyada marka farqi ayaa u dhexeeya. Haddii digsigaagu aanu lahayn xulashooyinka waxaad ku qaboojin kartaa digsiga dhalada khamriga si aad kor ugu qaaddo.
U oggolow keeggaaga cunnada ah ee malaa'igtu inuu si fiican u qaboojiyo DHAMMAAN foorari si looga ilaaliyo in keega uu ku dhex muqulo digsiga. Marka digsiga gebi ahaanba qabow yahay, waxaad ku dhex wareejin kartaa mindi subag inta u dhexeysa keega iyo digsiga si loo kala saaro keega. Haddii digsigaagu leeyahay sagxad hoose oo lagaa saari karo waad riixi kartaa hadda ama kaliya sii keegga dhowr jeer oo ruxrux ah oo jilicsan si ay keeggu u soo baxo.
Waxaan jecelahay inaan boodhka dusha sare ee keega malaa'igta leh sonkor budo ah oo aan ku daro kareemo la kariyey oo xasilloon iyo strawberries cusub laakiin gebi ahaanba ikhtiyaar u ah!
Keeggan ayaa maalmo ku jiri doona qaboojiyaha isagoon qallajin.
Isu geeyo miraha geedaha 'strawber', sonkorta, zest, iyo liin dhanaanta isla baaquli oo meel dhig inta ay keega malakku cunayso. Sonkorta ayaa ku milmi doonta waqti ka dib waxayna abuureysaa sharoobo macaan!
Gelatin ku dar biyo qabow oo ha u nuugo 5 daqiiqo.
Ku dhalaali gelatin muddo 10 ilbiriqsi ah ah microwave-ka illaa ay unku ku milmaan qaybaha ay ka kooban tahay gelatin.
Dhig kariimkaaga karbaashida qabow weelka dhajiskaaga istaaga oo ku lifaaqan lifaaq fiiqan.
Ku billow isku qas xawaaraha dhexdhexaadka ah illaa aad ka bilowdo inaad aragto khadadka ka sameysma dusha kareemka la kariyey. Ku dar sonkortaada budada ah iyo vaniljiga iskuna qas ilaa inta la isku darayo.
Ku dar tsp of kareemo culus gelatin. Haddii gelatin aad u qaro weyn yahay, dib u kululee 5 ilbidhiqsi. Waa inuu noqdaa dareere.
Intaad ku dhex qasmeyso si hoose, gelatin ku daadi kareemka dufanka leh iskuna qas ilaa aad ka gaartid taag adag laakiin jilicsan. Ha isku badin.
Qurxinta Cake Angel Cake
Ku diga digaaga cuntada malagaga ah ee la qaboojiyey kareemka la kariyey ee qaadada
Ku dar iniinyahaaga strawberry ka dib markaad jajabiso keega oo ku rid saxanka si aad uga fogaato sharoobada abuurista jahwareer weyn.
INTA AADAN BILAABAN - Natiijooyinka ugu fiican, isticmaal miisaanka cuntada si loo miisaamo maaddooyinkaaga. Ku beddelidda qoddobkan koobabka waxay u horseedi kartaa guuldarro. Akhriso qoraalkayga sida loo isticmaalo miisaanka wixii macluumaad dheeraad ah.
Waxaan isticmaalayaa Bosch Universal Plus qas a for this recipe, waxaad u isticmaali kartaa fiicni KitchenAid la baaquli bir ama a Mashiinka gacmeed.
Ma jiro budo dubis ama walax soo kordhaysa oo ku jirta cuntadan. Waxa kaliya ee abuuraya wiishka waa ukunta cad, markaa hubi inaad karbaashid si ay u noqdaan iftiin saafi ah oo qalafsan. Hawada oo dhan ayaa siinaysa keegga kor u qaadkiisa!
Hubso inaad isticmaasho baaquli bir ah si aad u sameyso meringue, iyo in baaquli yahay mid nadiif ah. Dufan kasta waxay ka hortageysaa ukuntaada cad inay karbaasho. Xitaa waad ku tirtiri kartaa xoogaa khal khal ah si aad taxaddar dheeraad ah u yeelatid.
Xusuusnow inaadan u ogolaan ukunta ukunta inay u gasho ukuntaada cad. Jaallo kasta oo raagtaa waxay ka joojin kartaa mingiskaaga karbaashida.
Waxaad isticmaali kartaa ukun cad oo la kariyey halkii aad ka isticmaali lahayd mid cusub. Haddii aad isticmaasho macdanta la kariyey, WAA INAAD sidoo kale isticmaasho kareem dhaldhalaalka ah si ay xasilinta uga caawiso.
Kaluunka galleyda ah ee ku jira cuntadan waxay ka caawineysaa in keega uu noqdo mid fudud oo qalafsan oo aan aad u cufneyn ama 'eggy'.
Markaad isku laalaabanayso meeriskaaga iyo burkaaga, mari meeriska hoostiisa spatula oo si tartiib ah u soo jiid bartamaha si aad kor ugu laabto. Ka taxaddar inaadan waligaa burburin ama aad isku darin, samir yeelo !
HA DHEXGELIN QORAALKAAGA! Keegga cuntada ee malakku wuu is qaboojiyaa isagoo foorara, markaa dhab ahaantii wuxuu u baahan yahay inuu ku dhago dhinacyada dhinacyada digsiga. Tani waxay xaqiijineysaa in keega uusan ku burburin naftiisa inta uu qaboojinayo.
KU digsiga tuubada waxaa ugu fiican in loo isticmaalo keegga cuntada ee malaa'igta. Tuubbada weyn ee ku taal bartamaha waxay ka caawisaa inay keenaan xoogaa kuleylka ah bartanka keega, iyaga oo si dhakhso leh oo siman u dubaysa. Ma isticmaali kartid bakeer keega ah, laakiin waxaad isticmaali kartaa 9 'x5' haddii loo baahdo.
U adeegida:8ounces|Kalori:314kcal(16%)|Kaarboohaydraytyada:54g(18%)|Protein:6g(12%)|Dufan:9g(14%)|Dufan Dufan:5g(25%)|Kalastarol:31mg(10%)|Sodium:76mg(3%)|Kalibaalium:133mg(4%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:42g(47%)|Vitamin A:333IU(7%)|Vitamin C:1mg(1%)|Kaalshiyamka:19mg(laba%)|Bir:1mg(6%)
Aasaaska Qurxinta Cake: Dharka kama dambaysta ah ee jilicsan ee Buttercream
Cunto Caan ah oo Cheesecake Cheesecake ah
waa maxay waxyaabaha ku jira jacaylka
sida loo ilaaliyo in midhaha buluuga ahi ay sii dheeraadaan
cunto karinta keega strawberry caafimaad leh leh strawberries cusub
Qumbaha Custard Recipe
Kani waa xabbo qumbaha qumbaha leh oo kareem leh oo laga sameeyay xoq iyadoo la isticmaalayo caano qumbaha dhabta ah! Buuxinta macaan ee keega, keega ama xitaa jiiska!
Keegga marmarka leh shukulaatada ganache frosting
Ka samee keeg marmar ah sida aan ugu jeclahay keegga vaniljka ee aan ugu jeclahay! Si fudud oo ka dhigaya keega marmar qoyan ee shukulaatada dhalaalaya!